Akukho nto ixhalabisa malunga nokudluliselwa koGawulayo! I-Semalt Expert Iyazi indlela yokususa kuyo kwi-Google Analytics
Kuwo wonke umsebenzisi we-intanethi, ugaxekile ngumcimbi oqhelekileyo owenza into enobungozi yakhowebsite. Ngokomzekelo, abaninzi abantu bafumana ii-imeyile ezivela kubathumeli abangaziwa, nto leyo ibangelwa kukuhlaselwa kwe-cyber. Ingxaki ibona ngakumbi xaabajoliswe kugaxekile abantu abanewebhu. Kwiimeko ezininzi, unako ukufumana ukuthunyelwa kogaxekile, apho ufumana khona i-traffichostukusuka kwiindawo ezithembekileyo - puff moderno. I-trafiki yenkohlakalo ekudlulisweni kogaxekile ayiguquki kwaye ikhokelela ekuboneni kwangoku. Spammerszinezixhobo eziyinkimbinkimbi kunye nezakhono ezaneleyo ze-SEO ukuze zifumane iinjongo zabo ngokufanelekileyo.
I-Google Analytics ibonisa umzila njengendlela yokukhohlisa ngokukhawuleza okanye ubukhulu obunxibelelana ngayongephepha lewebhu. Abakwa-Spammers banako ukukwenza ubukho bobukhomputha bobukhomputha, obuyabenza bangabonakali nakwizithuthi zangempela.Bangenza iimboniselo zekhasi eliyiyo, ukukhushulwa kwenkohlakalo, imicimbi, ukuthengwa kwedatha yokulandelwa kunye nokukhohlisa kweendaba zoluntu. Uninzi lweziIgaxekile zenzeke kwiphepha le-Google Analytics kunye negama lomncedisi elahlekanga ukuze banokutshintshela kwintsha nganye.
uMichael Brown, uMphathi weNtengiso kuMphumeleli iSemalt IiNkonzo zeDivithali, kunika ingqiqo kwezinye iingcebiso malunga nendlela yokulwa nokuthunyelwa kogaxekile kunye neendlela zokukhohlisa.
Iinjongo ezininzi ze-spam zijoliswe ekwenzeni i-website ithole ininzi yezithuthi kunye nokwenzaisayithi ukwandisa inani leembono..Ngenxa yoko, abanye abantu banokuzuza kulo mgaqo-mbumbulu. Ngokomzekelo, iiwebhusayithi ezinxulumeneyokufuna imoto ngqo. Esi siphumo singenza abaxhasi baxubushe ukuthenga kuthengisi ye-intanethi ngeembono ezininzi okanyeabathengi. Ukongezelela, i-traffic ithatha ingqiqo yokuthembeka, intliziyo yokwenza ukuguqulwa kwe-intanethi.
Ezinye iingcebiso zokuphepha ukugalelwa kogaxekile
Iibhothi ziyi-software ezichanekileyo kwaye zikhawuleza ekwenzeni imisebenzi ephindaphindakwiwebhu. Bangakwazi ukwenza imisebenzi ethile eyenziwa ngokuzenzekelayo kwiwebhusayithi njengabantu. Ngamanye amazwi, i-bots zinamarobhothi amancinci angenza okunyeimisebenzi enjenge-indexing content content kunye nee-injini zokukhangela. Nangona kunjalo, abahlaseli baqhubeka basebenzisa le bhobho ukufeza injongo zabo ezimbi ezifana:
Ukufumana izimvo kunye neembono
Ukuvuna i-imeyile evela kwiwebhusayithi
Ukudala i-akhawunti yomsebenzisi oyinyumba
Ukukhwabanisa kufana nokwenza idumela lomhlaba wokhuphiswano
Kufuneka usebenzise iifayile eziphambili ze-bot ukuze zikhuphe ezi zinto kwigama lakho lomsebenzisi. KwezinyeKwiimeko, abasebenzisi banokubethela iipaneli zomlawuli kunye nezinye iindawo ezibalulekileyo ezisengozini zewebhusayithi. Kwakhona kubalulekile ukuncedaabaxumi kwiindawo ezithile zokuhlaselwa kogaxekile. Ungabasindisa kwimiphumo emininzi eyingozi eyenziwa ngaba spammers ukuba baphumelele.
Kukho abantu abaninzi be-intanethi abanenjongo yokugula ngaphandle apho bajolise kuyo yonke intoumsebenzisi webhsayithi. Kubantu abanabasayithi, abagaxekile kunye nabahlaseli banokuqhagamshelana nexhoba elijongene nentsholongwane kwaye beba idatha ebalulekileyo. UphandoI-Analytics inokukwazi ukufumana nokuphelisa ezinye zezi ganeko zokuthunyelwa kogaxekile. Ugaxekile uqulethe iinjongo kunye neenjongo ezintlenjengeTrojans kunye neentsholongwane ezinxulumene nazo. Abanye babo banokugubungela iphaneli yomlawuli kwaye babambe idatha ebalulekileyo njengekhadi lesikweletu somthengiulwazi. Unokuphepha ugaxekile usebenzisa lesi sikhokelo. Ukhuseleko lwewebhusayithi yakho lungahlala luqinile kunye nokwenza indawo yakho ihlambuluke kwaye ikhululekilekubaduni.